Ikhaya le-Baddeck elinendawo yokubona izilwanyana zasekhaya ~ - I-Airbnb
Ikhaya le-Baddeck elinendawo yokubona izilwanyana zasekhaya ~
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguWillard
Igumbi lokulala elinesibini elinobuhlobo kwikhaya elibekwe kwisitalato esikhulu selali yaseBaddeck, umgama wokuhamba ukusuka kwindawo yabakhenkethi, iivenkile zokutyela, iivenkile zekofu, indawo eluncedo kunye neevenkile ezithengisa ukutya, iklabhu yeyacht, kunye nendawo ebukekayo yasemanzini.
Nceda uqaphele, eli khaya lakhiwa ngaphezulu kwenkulungwane eyadlulayo ngohlaziyo oluncinci. Yonwabela umlinganiswa woqobo wale ndlu yasefama iyimbali ukusuka kwiwallpaper yayo yoqobo ukuya kwiisinki zayo zompompo kabini.
Ngamagumbi okulala amane, iibhafu ezimbini ezigcweleyo kunye neebhafu ezimbini ezinesiqingatha, eli khaya likhulu losapho linokwamkela izibini ezine, iintsapho ezininzi, okanye amaqela amancinci ahamba kunye.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinesitovu, ifriji, itoaster, imicrowave, umenzi wekofu (kunikezelwe ikofu), iketile (inikwe iti), izinto zokupheka, izitya kunye nempahla. Umabonakude wentambo, i-intanethi, kunye nendawo yokusebenza nayo ibonelelwe.
Omabini amagumbi okuhlambela agcweleyo-enye enebhafu, enye eneshawari yebhafu- akwinqanaba eliphezulu lekhaya kwaye aya kufuna ukusetyenziswa kwezinyuko ukufikelela. Ibhafu enye enesiqingatha ebekwe kumgangatho omkhulu, enye kumgangatho wesibini.
Sincoma kakhulu iPizza kaTom, umgama nje osuka kumnyango wakho wangaphambili. Ukutya okumnandi, umoya onobubele, kunye nokonwabisa kwalapha ekhaya ngobusuku bangoLwesine!
Ikhaya likwakumgama wokuhamba woku kulandelayo:
Baddeck Ekhaya Hardware
IZiko leeNkcukacha zabatyeleli baseBaddeck (iZiko loKhenketho)
Iimbotyi Kukho Ivenkile yekofu
Indawo yokutyela yeBell Buoy
Bras d'Or Yacht Club (akukho bulungu bufunekayo!)
Ifuna uncedo (ngqo ngaphaya kwesitrato)
IRoyal Legion yaseKhanada, iSebe 53
Yima kwaye ugxininise uBuso bakho ngelori yokutya
Wong's Bras d'Or House Family Restaurant
Umbuki zindwendwe ngu- Willard
Ulwazi loqhagamshelwano luya kubonelelwa kuyo nayiphi na imibuzo okanye iimeko ezinokuvela.